Wax ka ogoow 5ta Rikoor aysan weli Jabinin Ronaldo iyo Messi. | Gooldhalin
Wax ka ogoow 5ta Rikoor aysan weli Jabinin Ronaldo iyo Messi.
Messi iyo Ronaldo oo ah labada ciyaaryahan ee ugu wanaagsan kubbada cagta aduunka,ayaa waxaa jiraa rikooro aysan wali jabinin.
Labadan ciyaaryahan oo min shan jeer ku guuleystay abaalmarinta laciibka ugu wanaagsan aduunka Ayaan ku eegi doonaa maqaalkan rikooro aysan wali jabinin.
# 1 Goolal badan oo laga dhaliyo hal kulan oo La Liga: Laszlo Kubala
Messi ayaa haatan ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda La Liga, isagoo dhaliyay 369 gool 403 kulan oo uu u saftay Barcelona. Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta labaad ka galay liiska, isagoo helay 297 gool 284 kulan oo uu u saftay Real Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, midkoodna ma heysto rikoorka goolasha ugu badan ee hal kulan laga dhaliyo La Liga ah. Messi ayaa afar gool ka dhaliyay Valencia 2012kii, halka Ronaldo uu shan gool u dhaliyay Espanyol 2015.
Laszlo Kubala aya heysta rikoorka goolal badan in laga dhaliyo hal kulan, isagoo dhaliyay 7 gool kulankii Barcelona ay ka badisey Sporting Gijon 1952dii.
# 2 Goolasha ugu badan ee Koobka Aduunka: Miroslav Klose
Koobka adduunka ayaa ah tartan aysan weli ku guuleysan Ronaldo iyo Messi. Ciyaaryahanka reer Argentine ayaa ku guuldareystay inuu ku guuleysto abaalmarin kasta oo weyn oo kubadda Dahabiga ah ee ciyaaraha Olimbikada ee 2008dii, inkastoo Ronaldo uu ku faraxsan yahay koobkii Euro 2016 ee uu la qaaday Portugal.
Iyadoo Koobka Aduunka ee Russia lagu qaban doono, Portugal ama Argentina ma ahan kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan koobkan. Inkastoo Messi uu ku guuleystay Ballon Golden Koobka aduunka ee lagu qabtay Brazil 2014l, labaduba waxay ku fashilmeen inay xulalkooda meel sare ka gaarsiiyaan tartanka.
Messi ayaa koobka aduunka ka dhaliyay 5 gool halka Ronaldo uu dhaliyey 3. Rikoorkas waxaa kaga wanaagsan Miroslav Klose, xiddigii hore ee Jarmalka oo dhaliyey 16 gool.
# 3 Goolasha ugu badan horyaalka xilli ciyaareed: Ferenc Deak
Ronaldo iyo Messi waa ciyaartoy buuxa oo kubada cagta ah, ma ahan wax laga murmi karo xiligaan Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta Pichichi 4 jeer, Ronaldo ayaa isagana ku guuleystay 3.
Weeraryahanka Real Madrid ayaa dhaliyey 48 gool xilli ciyaareedkii 2014-15 , weeraryahanka Barcelona ayaa jabiyay rikooro badan xilli ciyaareedkii 2011-12, isagoo dhaliyay 50 gool
Ferenc Deak ayaa haysta rikoorka ciyaaryahanka goolasha ugu badan hal xili ciyaareed ka dhaliya La liga waxaana uu dhaliyey 66 gool xilli ciyaareedkii 1945-46.
#4 Hattricks ugu badan: Pelé
Messi iyo Ronaldo ayaa dhaliyay goolal badan oo qatar ah kubada cagta. Xiddiga garabka ka ciyaara ee reer Portugal ayaa ah ciyaaryahanka keliya ee seddexleey dhaliyay hal xilli ciyaareed gudahiis, waxaana uu dhaliyay 32 seddexleey oo La Liga ah, taasoo ka dhigeysa ciyaaryahanka ugu badan ee seddexleey ka dhaliya taariikhda horyaalka Spain. Sidoo kale Lionel Messi ayaa sameeyey 28.
Dhamaan tartamada oo dhan, Ronaldo waxa uu heystaa 49 sadaxleey xirfadiisa, halka Messi uu haysto 44. Hase yeeshee, xitaa uma dhowaan rikoodhka 92 mar ee halyeeyga reer Brazil Pelé.
Xiddiga 3da jeer ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa dhaliyey 92 sadaxleey xirfadiisa xiyaareed.